အမျိုးမျိုးသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများဖြေရှင်းရန် ကတိကဝတ်နှင့်အတူ G20 ရောမထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးဆုံး - Xinhua News Agency
အီတလီနိုင်ငံရောမမြို့၌ ကျင်းပသော G20 ခေါင်းဆောင်များ၏ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမြင်ကွင်းများအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ရောမ ၊ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့၌ ကျင်းပသော G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည် COVID-19 ကပ်ရောဂါမှသည် မြင့်တက်လာသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများအား ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရာတွင် နိုင်ငံစုံပါဝင်ရေးဝါဒ နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍကို ထပ်လောင်းအတည်ပြုကြောင်း ကြေညာစာတမ်းတစ်ခု ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့်အတူ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင် ပြီးဆုံးခဲ့သည်။
“ G20 ရောမ ခေါင်းဆောင်များ၏ ကြေညာစာတမ်း”သည် ကပ်ရောဂါအား ဘုံတုံ့ပြန်မှုတွင် တွန်းအားပေးရန် နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုအတွက် အထူးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပြန်လည်နလံထူရေးအတွက် လမ်းကြောင်းဖော်ဆောင်ရန် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
ကမ္ဘာ့အဓိကစီးပွားရေးနိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များသည် ကုန်စည်းထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အဟန့်အတားဖြစ်ခြင်း ကဲ့သို့သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများတွင် ကျန်ရှိနေဆဲ ပြဿနာ အလားအလား နှင့် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များအား ပြန်လည်နလံထူရေးအတွက် ကပ်ရောဂါ၏ အကျိုးဆက်များအား ဖြေရှင်းရန် အားလုံးသော ဖြစ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းပေါင်းစုံကို အသုံးပြုသွားရန် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတွင် ကာကွယ်ဆေး၏ မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပြီး ဝင်ငွေနိုမ့်ပါးနိုင်ငံများ နှင့် ဝင်ငွေအလယ်အလတ်ရှိသော နိုင်ငံများ၏ လိုအပ်ချက်အား အထူး ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အတူ ရောဂါဆိုင်ရာကုထုံးများ နှင့် ရောဂါရှာဖွေရေးများ ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အာနိသင်ထိရောက်သော ၊ အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ၊ လက်လှမ်းမီသော ဘေးကင်းသော ကာကွယ်ဆေးများ ညီတူညီမျှ နှင့် အချိန်မီ ရရှိရေး ပိုမိုကြိုးပမ်းအားထုတ်သွားကြရန် ၎င်းတို့က ကတိကဝတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
“ ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဖြူးခြင်းမှာ ကူညီဆောင်ရွက်မှုတွန်းအားပေးဖို့ နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ မရှိမဖြစ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ တင်သွင်းရေး ၊ ထောက်ပို့နဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဆက်စပ်မှု အတားအဆီးတွေကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်သွားရပါလိမ့်မယ်” ဟု ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာနှင့်ပတ်သက်၍ G20ခေါင်းဆောင်များက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပျမ်းမျှအပူချိန်တိုးမြင့်လာခြင်းအား ၂ ဒီဂရီဆဲလ်စီးယက်စ် အောက်လျှော့ချရေး ဖြစ်သော ပါရီသဘောတူညီချက်ရည်မှန်းချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ရန် နှင့် အပူချိန်ကို အကြို-စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်ဖြစ်သည့် ၁.၅ ဒီဂရီဆဲလ်စီးယက်အထိ ကန့်သတ်ရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရန် ဆက်လက် ကဝတ်ကဝတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
“ ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးက အောင်မြင်မှုတစ်ခုပါပဲ” ဟု အစည်းအဝေးပြီးနောက် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် အီတလီနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Mario Draghi က ပြောကြားခဲ့ပြီး ရာသီဥတု ၊ မိုးလေဝသ နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် မရှိမဖြစ် အရေးပါကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံမှာ အကောင်းဆုံးလို့ ကျွန်တော်တို့သိထားတာက နိုင်ငံစုံပါဝင်ရေးဝါဒပါပဲ” ဟု Draghi ကပြောကြားခဲ့ပြီး G20 အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအနေဖြင့် လျင်မြန်စွာ အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
G20 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့် ပါဝင်နေပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး(GDP) အားလုံး၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် နှင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
G20 ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဌနိုင်ငံဖြစ်သော အီတလီနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် နှစ်ရက်တာလက်ခံ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို အွန်လိုင်း(online) နှင့် အော့ဖ်လိုင်း(offline) ပုံစံနှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ကျင်းပခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်ကာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက G20 ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဌ နိုင်ငံအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
ROME, Oct. 31 (Xinhua) — The G20 Summit in Rome ended on Sunday with the adoption ofadeclaration reaffirming the crucial role of multilateralism and international cooperation in overcoming the global challenges arising from the COVID-19 pandemic.
The “G20 Rome Leaders’ Declaration” pledges to strengthen the common response to the pandemic and pave the way foraglobal recovery, with particular concern for the most vulnerable.
Photo taken on Oct. 30, 2021 showsaview of the Group of Twenty (G20) Leaders’ Summit held in Rome, Italy. (Xinhua/Zhang Cheng)